Adiresy: Nosy Horn, Tierra del Fuego, Chilie;
Vokatra: tamin'ny taona 1616.
Ny vondronosy Tierra del Fuego dia iray amin'ireo toerana mahatalanjona indrindra eto an-tany. Izy io dia ahitana ny nosy manan-danja mitovy amin'io sy ny vondron-tsambo kely kely, izay ahitana ihany koa ny "Horn of the Cape" any Chile . Androany, ao amin'ny faritaniny dia zaridaina nasionaly lehibe, momba ny endri-javatra izay horesahina any aoriana ao amin'ny lahatsoratra.
Aiza ny Cap Horn eo amin'ny sarintany?
Ny Havoanan'i Cape dia ao amin'ny nosy iray ihany koa ary ny faritra atsimo atsinanan'i Tierra del Fuego. Hita avy amin'ireo mpikaroka holandey V. Schouten sy J. Lemer tamin'ny taona 1616. Etsy ankilany, maro amin'ireo mpizahatany no mihevitra fa ity no faritra manerana an'i Amerika Atsimo, saingy tsy izany no izy. Eo amin'ny andaniny roa, ny tapany dia manasa ny ranon'ny Drake Passage, izay mampifandray ny Pasifika sy Atlantika.
Ny Cap Horn, izay anisan'ny Antarctic Circumpolar Current, dia mendrika manokana. Noho ny tafiotra mahery sy rivotra mahery avy any andrefana ka hatrany atsinanana, dia heverina ho iray amin'ireo loza mampidi-doza indrindra eto amin'izao tontolo izao ity toerana ity. Na izany aza, tsy misy fiantraikany amin'ny lazan'ny kaopy any amin'ireo mpizaha tany vahiny izany.
Ny Cap Horn dia faritana ara-jeografika amin'ny fireneny ao Chili ary fanintelon'ny fizahan-tany manan-danja. Anisan'ny toerana tena mahaliana indrindra amin'ity faritra ity ny:
Leighthouses . Eo amin'ny faritra afovoany sy eo akaikiny dia misy tsongo roa, izay tena mahaliana ny mpandeha. Ny iray amin'izy ireo dia mivantana mivantana any Cape Horn ary toeran'ny loko matevina. Ny iray hafa dia toeram-piantsenan'ny tafika Shiliana ary manodidina ny iray kilaometatra mankany avaratratsinanana.
Valam-pirenena ao Cabo de Hornos . Io tahiry biosphère kely kely io dia natsangana tamin'ny 26 aprily 1945 ary mandrakotra faritra 631 km ². Ny habetsaky ny biby sy ny zavamaniry ao amin'ny valan-javaboary, noho ny fiantraikany tsy tapaka ny mari-pana amin'ny rivotra, dia tsy fahampiana. Ny tontolon'ny zavamaniry dia asehon'ny lichens sy ny ala madinika ao Beal Antarctique. Raha ny momba ny tontolon'ny biby, dia matetika ny mahita penguins Magellanic, petrolejika goavam-be sy albatrosan'ny mpanjaka.
Na dia eo aza ny loza aterak'io toerana io, maro ireo mpizahatany isan-taona no mamoaka fandaharana manokana mba hahazoana traikefa tsy hay hadinoana ho an'ny fiainana ary hanao sary mahafinaritra an'i Cape Horn. Tsy afaka ny hiditra any ianao, koa manorata mialoha ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny mpitarika mpizahatany efa za-draharaha avy amin'ny masoivohom-baomiera eo an-toerana.
Ny satroboninahitry ny devoly
Lalao ho an'ny ankizy 5 taona
Ahoana ny hanasana hamsters?
Pumpkin ao anaty vilany ao anaty lafaoro
Tazo eo an-tongotra
Fanangonam-bokatra amin'ny fararano 2014
Katedralin'i St. Mark (Shily)
Fanasana akanjo ho an'ny fotoana rehetra
Ny kleptomania an'ny ankizy
"Ny viriosy amin'ny fandrosoana aloha" dia aretin'ny ray aman-dreny maoderina
Noho ny dokam-barotra an-dàlambe Melania Trump dia hiady amin'ny sekoly iray avy any Kroasia
Snud amin'ny andaniny iray
Ahoana ny famokarana siramamy?
Midika ho fampiroboroboana ny fody ao an-trano
Karikaturenan'i Nikolai Baskov, izay mahamenatra antsika noho ny antony, fa tsy izy!
Salady miaraka amin'ny bibikely - fanatsarana
Hividy sigara ao anaty fantsom-bokatra - recipe
Toby 38 ao anaty ankizy
Sakafo mitahiry amin'ny henam-pako
Aretina aketemôma amin'ny ankizy
Tahotra ny toerana voahidy